Shiinaha Soosaarayaasha Soo-Bandhigidda Soo-saarista Soo-saarista Kros ee Shiinaha iyo alaab-qeybiyeyaasha | KAIQUAN
Bambooyinkan taxanaha ahi waxay ku habboon yihiin wareejinta nadiif ah ama si khafiif ah u nijaasoobay dareeraha dhexdhexaadka ah ama khafiifka ah ee wax daaqaya oo aan lahayn qaybo adag. Bamkaan taxanaha ah waxaa badanaa loo isticmaalaa sifeynta saliidda, warshadaha kiimikada, warshadaha kiimikada, soosaarida dhuxusha, warshadaha waraaqaha, warshadaha badda,
warshadaha korontada, cuntada iyo wixii la mid ah.
awoodda S: 0.5 ~ 3000m3 / saac
Madaxa H: 4 ~ 230m
Cadaadiska shaqada (p): qiimaha ugu badan wuxuu noqon karaa 7.5MPa.
Heerkulka shaqada (t): -45 ~ + 400
API610 th8 / th9 / th10 / th11 standard design
Bambooyinkan taxanaha ahi waxay ku habboon yihiin wareejinta nadiif ah ama khafiif ah oo wasakhda dhexdhexaad ah ama khafiif ah dareeraha daxalka leh oo aan lahayn qaybo adag. Mashiinka taxanaha ah waxaa badanaa loo isticmaalaa in lagu safeeyo saliidda, warshadaha kiimikada, warshadaha kiimikada, soosaarida dhuxusha, warshadaha waraaqaha, warshadaha badda, warshadaha korontada, cuntada, farmashiyaha, ilaalinta deegaanka iyo wixii lamid ah.
Mashiinka farsamaynta shidaalka ee 'KZA petrochemical centrifugal pump' wuxuu waafaqsan yahay heerka AOI610 sidaa darteed waxaa jira qaabab hoose:
1) Qaab dhismeedka bamka ayaa ah mid la isku halleyn karo oo aamin ah hawlgallada mashiinkuna waa mid deggan.
2) Waxtarka mashiinka ee celceliska celceliska sare ee tamarta oo yar.
3) Waxqabadka cavitation pumpku wuu wanaagsan yahay aadna wuu uga fiican yahay alaabada la midka ah. Qiimaha ugu hooseeya ee cavitation-ka wuxuu noqon karaa 0.5m oo badeecooyin badan ah, dhanka kale, NPSHr qiimaha badeecada guud waa qiyaastii 1m. NPSHr oo hooseeya micnaheedu waa rakibidda bamka oo hooseeya sidaa darteed bamka KZA micnaheedu waa kharashka dhismaha oo yar.
4) Qiyaasta waxqabadka mashiinka ayaa ah mid ballaaran oo awooda ugu badan ay noqon karto 3000m3 / h madaxa ugu badanaana wuxuu noqon karaa 230m, isla markaa, awooda bamka iyo madaxa gooladaha waa la xiray si ay ugu fududaato in la xusho bamka.
5) Waxaa jira seddex qaab oo qaboojiye ah, qaboojinta hawada, qaboojinta marawaxadaha iyo qaboojinta biyaha iyadoo loo eegayo heerkulka shaqada bamka kala duwan. Qaboojiyaha marawaxadaha ayaa si gaar ah ugu habboon meelaha aan lahayn biyo nadiif ah.
6) Jaangoynta iyo jaamacadu waa sareysaa. Marka laga soo tago qaybaha caadiga ah ee caadiga ah, jilbaha iyo jirka sidda ee KZA iyo KZE waa la is-weydaarsan karaa.
7) Mashiinka qaybaha qoyan waxaa lagu xushay heerka API iyadoo loo eegayo xaaladda shaqada ama macaamiisha.
8) Furfuran furan sidoo kale waxaa loogu talagalay bamka taxanahan xaaladaha kala duwan ee shaqada.
Shirkaddayadu waxay heshay shahaadada tayada ISO9001.And waxaa jira nidaam xakameyn tayo leh oo adag inta lagu jiro naqshadeynta bamka iyo habka si tayada loo damaanad qaadi karo.
Heerka waxqabadka: Awoodda Q = 0.5 ~ 3000m3 / h, Madaxa H = 4 ~ 230m
Cadaadiska shaqada (p): wuxuu noqon karaa 2,5MPa (oo laxiriira maaddada iyo heerkulka shaqada, oo lagu muujiyay jaantus PT)
Heerkulka shaqada (t): -45 ~ + 180
Xawaaraha caadiga ah (n): 2950r / min iyo 1475r / min
Bambooyinkan taxanaha ahi waxay ku habboon yihiin wareejinta nadiif ah ama si khafiif ah u nijaasoobay dareeraha dhexdhexaadka ah ama khafiifka ah ee wax daaqaya oo aan lahayn qaybo adag. Bamkaan taxanaha ah waxaa badanaa loo isticmaalaa sifeynta saliida, warshadaha kiimikada, warshadaha kiimikada, dhuxusha, warshadaha waraaqaha, warshadaha badda, warshadaha tamarta, cuntada, farmashiyaha, ilaalinta deegaanka iyo wixii la mid ah.
KZE, KZEF Nidaamka shidaalka ee Petrochemcial centrifugal ayaa la soo saaray iyada oo la raacayo API610 markaa waxaa jira qaabab hoose:
6) Jaangoynta iyo jaamacadu way sarreeysaa. Marka laga soo tago qaybaha caadiga ah ee caadiga ah, jilbaha iyo jirka sidda ee KZA iyo KZE waa la is-weydaarsan karaa.
Cadaadiska shaqada (p): KZE 2,5MPa KZEF 7.5MPa (oo laxiriira maaddada iyo heerkulka shaqada, oo lagu muujiyey jaantus PT)
Hore: Taxanaha VCP Mashiinka Mashiinka Tooska ah
Xiga: KCZ Taxanaha Nidaamka Warshadaha Kiimikada
Multistage Centrifugal Bamka
Multistage Double nuugista Centrifugal saar
Ahama Multistage bamka Centrifugal
Vertical Inline Multistage Centrifugal Bamka
Gawaarida Multistage Centrifugal Pump
KQA Taxanaha Multistage saar la Axial daatay dahaarka
Taxanaha KGD / KGDS Mashiinka Tuuboyinka Gawaarida ah
KD / KTD Taxanaha Multistage bamka
KCZ Taxanaha Nidaamka Warshadaha Kiimikada
Taxanaha KDA Mashiinka Nidaamka Petrochemical